Dib u dhac ku yimid ku soo laabashada Eritrea ee urur-goboleedka IGAD+SAWIRRO - Worldnews.com
Dib u dhac ku yimid ku soo laabashada Eritrea ee urur-goboleedka IGAD+SAWIRRO
Dib u dhac ku yimid ku soo laabashada Eritrea ee urur-goboleedka IGAD: SAWIRRO
Waxaa dib u dhacay ku soo laabashada ay Eritrea ku soo laaban lahayd xubinnimadeedii urur goboleedka IGAD ee la filayey in ay maanta dhacdo, sida uu qorshuhu ahaa.
Wafdiga Eritrea ayaanan imaanin madasha shirka, waxaa kale
"waa arrin wakhti uun ku xiran. Heshiisku wuu dhacay, waxaa kaliya ee dhiman in lagu dhawaaqo"
Dib u dhac ku yimid ku soo laabashada Eritrea ee IGAD
Waxaa dib u dhacay ku soo laabashada ay Eritrea ku soo laaban lahayd xubinnimadeedii urur goboleedka IGAD ee la dilayey in ay maanta dhacdo, sida uu qorshuhu ahaa. Wafdiga...
Halkee ka soo billowday khilaafka u dhaxeeya Eritrea iyo IGAD?
Ka dib is baddelada gobolka ka dhacay, ayaa Eritrea si lama filaan ah waxay u noqotay waddan u furmay waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD, marka laga reebo Jabuuti,...
Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed, Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas Riek Machar ayaa heshiis awood qaybsi ah ku kula saxiixday xarunta dalka Suudaan ee...
ADDIS ABABA - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeybgalay Shirka 32aad ee Madaxda Urur Goboleedka IGAD kaasoo...
Gareowe Online 2018-06-22
Urur Goboleedka IGAD Oo War Kasoo Saaray Weerarada Al Shabaab Ay Ka Geystaan Muqdisho
War kasoo baxay Urur Goboleedka IGAD ayaa waxaa looga hadlay weerarada Ururka Al Shabaab�ay ka geystaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho. IGAD ayaa waxa ay...
Waxaa Magaalada Adis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gaba gabeeyay Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD kaas oo maalintii shalay aheyd ka furmay dalkaasi...
Waxaa Magaalada Adis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gaba gabeeyay Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD kaas oo maalintii shalay aheyd ka furmay dalkaasi Itoobiya. Soomaaliya waxaa Shirkaasi u ......
Madaxda dalalka IGAD oo u fadhiya in Eritrea lagu soo dhoweeyo xubinnimada ururka
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaliya, Axmed Ciise Cawad, oo waraysi gaar ah siinayey laanta af Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in arrinta Eritrea looga hadlayo shirka madaxda IGAD ee galinka dambe. Wuxuu sheegay in laga gudbay "arrintii keentay in markii horeba laga saaro ururka", isagoo sheegay in "xalay dhalay laga noqday". Arrintaas ayuu sheegay in sababteeda ay leeyihiin...
Madaxweyne Kiir oo ku baaqay wadahadallo qaran
Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed, Salva Kiir, ayaa ku baaqay wadahadallo qaran oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda seddexda sano. Asaga oo la hadlaya xildhibaanada baarlamaankiisa ee magaalada Juba, ayaa Salva Kiir waxa uu sheegay in wadahadaladaasi ay...
Dib-udhac ku yimid in Eritrea kusoo laabato IGAD [Akhri Sababta]
ADDIS ABABA - Waxaa dib u dhac uu ku yimid isku day la doonayay in Eritrea dib ugu soo laabato xubinimada Urur goboleedka IGAD, kaasoo shalay shirkiisa 33aad ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ee caasimadda Eithiopia. Kulankii shalay ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka IGAD ku midoobay ayaa Ajandaha ugu wayn wuxuu ahaa soo afjaridda colaadda South Sudan, kaasoo ugu dambeyn qalinka...
ADDIS ABABA - Dowladda Eritrea ayaa la rajeynayaa inay dib ugu soo laabtay Urur goboleedka IGAD kadib heshiiskii ay kala saxiixdeen Eithiopia, kaasoo ay kusoo afjareen colaado wax ka badan 20 sano ka dhaxeysay. Ra'iisul Wasaaraha Eithiopia, Abiy Axmed iyo Xoghayaha fulinta ee IGAD, Maxbuub Macalin ayaa ku saxiixnaa warqad kasoo baxday Urur goboleedka IGAD, oo ay dalalka Geeska...